Ambo ammaa yeeroo kana staadimitti akkaa kanaan jiru! Loltuun federalaa isaa kan reeba jirti. Meere dimokirassiin nugus Abiy z itiopiayaa? - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAmbo ammaa yeeroo kana staadimitti akkaa kanaan jiru! Loltuun federalaa isaa kan reeba jirti. Meere dimokirassiin nugus Abiy z itiopiayaa?
Hiriira guyyaa har’aa yuunivesiitii AMBOO mooraa guddicha keessatti sa’aatii 1:30 irraa kaasee geggeeffamaa ture humni waraana wayyaanee mooricha keessa jiruun aara nama boossisu itti roobsuu fi kan kufanis bira ga’anii uleen reebuun barattoonni mooricha keessaa bahanii utuu ummatatti hin makamiin addaan facaasan yeroo ammaa kanallee sagaleen iyyaa fi dhukaasaa mooricha keessaa dhagahamaa jira.